Xiaomi dia manolotra vokatra vaovao amin'ny tolotra - SmartMe
Xiaomi dia manolotra vokatra vaovao amin'ny tolotra
Navoakan'i	 Sebastian K.
mpamaky, inkpalma 5, xiaomi
Xiaomi dia mampiditra ny mpamaky vaovao InkPalm 5. Ny vidiny ho an'ity fitaovana ity dia somary ambany ihany - efa nianarantsika ny pitsopitsony teknikan'ity fitaovana ity. Jereo izay azony atolotra antsika.
Mahagaga ireo masontsivana
Xiaomi InkPalm 5 no mpamaky e-vaovao an'ny orinasa sinoa. Kambana be ilay fitaovana satria 5 metatra mahery ny haben'ny efijery. Ny vidin'ny fitaovana dia manodidina ny PLN 360 novaina ho zlotys poloney. Fantaro ny famaritana ara-teknika an'ity fitaovana ity.
E-reader Xiaomi InkPalm 5 - famaritana ara-teknika
Takela-taratasy 5,2-inch misy vahaolana 1280 x 720 teboka (284 ppi)
Fahatsiarovana RAM 1 GB
32 GB amin'ny habaka data
Ny batterie misy 1400 mAh
Wi-Fi b / g / n (2,4 sy 5 GHz)
Ny masontsivana, araka ny hitanao, dia tena tsara. Manintona ihany koa ny vidiny - mieritreritra ny hanandrana an'ity fitaovana ity ve ianao?
Xiaomi Mi Mix 4 dia manakaiky. Mahafantatra antsipiriany vaovao izahay
Xiaomi Mi Mix 4 no finday vaovao vaovao sy matanjaka kokoa tsy misy rafitra avy amin'i Xiaomi. Manana famoahana hafa ilay fitaovana. Efa fantatsika izay efijery hampiasana ity smartphone ity. Xiaomi Mi Mix 4 dia hanomboka amin'ny faran'ny ...
Xiaomi dia nanolotra ny taranaka faharoa an'ny mpandahateny mahay
9 Aprily 2021
mahay miteny, xiaomi, xiaomi mi ai mpandahateny mahay
Vao nanolotra ny kinova farany an'ny Mi AI Smart Speaker ny mpanamboatra sinoa. Amin'ity kinova ity, tsy ny kalitaon'ny feo ihany no nohatsaraina, fa ny fampidirina amina fitaovana hafa tafiditra ao amin'ny trano an-tsaina. Inona no ...
Fotoana tonga lafatra 43 hankalazana ny fetin'ny mpankafy Xiaomi
Ny fanentanana fampiroboroboana Xiaomi lehibe indrindra tamin'ity taona ity dia nanomboka nanomboka omaly. Vokatra 43 samihafa no hamidy amin'ny vidiny mihena be sy amin'ny seta manintona. Ny fetibe mpankafy Xiaomi MFF (Mi Fan Festival) dia fotoana iray isaorana ny rehetra ...
Ampahafantaro ny Mi MIX FOLD, finday avo lenta finday voalohany Xiaomi
izaho mifangaro, mifangaro aforitra, xiaomi
Xiaomi dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny finday avo lenta voalohany azo raisina, Mi MIX FOLD, tamin'ny fanombohana vokatra vaovao tamin'ny lohataona 2021, izay nanambarana ny Mi 11 Pro sy Mi 11 Ultra teo aloha. Fitaovana fampisehoana miovaova 8,01 santimetatra ...
Xiaomi Mi Band 6 miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
ny ekipako, mi band 6, xiaomi
Ny Mi Band 6 dia tarika Xiaomi vaovao izay hanana fampiasa vaovao. Hisy ihany koa ny fanavaozana ny rindrambaiko Mi Fit. Ny fanovana vaovao sy ny fanavaozana ny Xiaomi Mi Band 6 dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy andro vitsivitsy lasa izay. Any Chine, ...
Xiaomi dia mikasa ny hamelombelona ny Mi Box S amin'ny Android TV
android tv, mi boat p, xiaomi
Xiaomi dia mikasa ny hamelombelona ny Mi Box S avy amin'ny Android TV. Ny modely vaovao dia naseho tao amin'ny FCC. Na izany aza, tsy mbola hita ny fanovana ny Mi Box S vaovao. Andiany nohavaozina an'ny Xiaomi Mi Box S -...
Xiaomi dia efa manana ny AirPower-ny. Inona no lazain'i Apple?
30 Martsa 2021
famandrihana tsy misy tariby, dovia, mametaka tsihy, Pad famandrihana Wireless, xiaomi
Ny fiasan'ny tariby tsy misy tariby dia azo antoka ho porofo amin'ny ho avy ary toa fantatr'i Xiaomi tsara izany. Ny mpanamboatra sinoa dia vao avy nanambara ny famoahana ny fandriana famandrihana vaovao. Ka nanao dingana mankany ...
Xiaomi dia manolotra toetra vaovao: Alive
Xiaomi - orinasa iray izay saika tsy mila ampidirina, dia nanambara ny mombamomba ny orinasa vaovao mamelombelona izay manambatra ny filozofia biolojika amin'ny foto-kevitra "Alive". Ny marika vaovao dia mikendry ny hanamafisana ny toerana misy an'i Xiaomi amin'ny sehatra premium. Vaovao, mavitrika kokoa ...
Xiaomi koa dia naneho rindrambaiko Android vaovao
Mi Smart Projector 2 Pro, fandefasana, xiaomi
Nandritra ny hetsika farany nataony, Xiaomi dia nanolotra tsy ny smartphone fotsiny sy ny tarika smart smart. Tetikasa iray mahaliana antsoina hoe Mi Smart Projector 2 Pro ihany koa no nahita ny mazava. Inona no atolotray ary inona no ...
Add a comment hanafoana ny valin-
Ny adiresy email dia tsy ho namoaka. Fields izay tsy maintsy vita dia marika * *
Tsarovy ao anaty browser ny data-ko rehefa manoratra hevitra manaraka.